सरकारले ३ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएपछि गोविन्द केसीका तर्फबाट ४ सदस्यीय टोली गठन - Birgunj Sanjalसरकारले ३ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएपछि गोविन्द केसीका तर्फबाट ४ सदस्यीय टोली गठन - Birgunj Sanjalसरकारले ३ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएपछि गोविन्द केसीका तर्फबाट ४ सदस्यीय टोली गठन - Birgunj Sanjal
सरकारले ३ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएपछि गोविन्द केसीका तर्फबाट ४ सदस्यीय टोली गठन
२१ आश्विन २०७७, बुधबार २१:४५
वीरगंज | चिकित्साशिक्षा सुधारको माग राख्दै २४ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि सरकारले ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेसँगै केसीका तर्फबाट ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधवार शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा रहेका छन् । डा केसीका तर्फबाट डा जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोलीको घोषणा भएको छ।
टोलीमा डा अन्जनी कुमार झा, डा लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल रहेको डा केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। सरकारी वार्ता टोली गठन भएसँगै शिक्षा सचिव मैनालीले भने, ‘डा केसीको टीमसँग छलफल गरी समय र स्थान तोकेर बिहिवारबाटै वार्ता सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’